Nahoana no rava alohan’ny nanombohany ny Super League Eoropeana · Global Voices teny Malagasy
Matin'ny kapoky ny mpiondana, mpanohana ary manampahefanan'ny football ny fifanarahana
Voadika ny 08 Jona 2021 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, Esperanto , English
“File:002 men at work UEFA 2009, Rome.jpg” avy amin'i funnydae natao lisansa CC BY 2.0
Tamin'ny 18 avrily, taitra tamin'ny fanambaràna fananganana ny European Super League, lalao fihodinana misintaka amin'ny fifaninanana football lehibe ao amin'ny faritra, Champion's League an'ny UEFA ny mpiondana manerana an'i Eoropa sy izao tontolo izao.
Ny Super League dia fifaninanana isa-taona ifaninanan'ny ekipa sangany ao Eoropa, ahitana “ekipa mpanorina” miisa 15 ho mpandray anjara maharitra, sy ekipa dimy mila tafakatra ho amin'izany. Klioba anglisy no maro an'isa amin'ny ekipa mpanorina, ahitana an'i Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, ary Liverpool. Ny avy ao Espaina, nahitana an'i Atletico de Madrid, Real Madrid, ary Barcelona. Farany ny klioba Italiana dia nahitana an'i AC, Internazionale, ary Juventus.
Ny nokinasa hanombohana dia ny Aogositra 2021, saingy nirodana ela nialoha izany ilay Ligy novolavolaina noho ny fanamelohana azony avy amin'ireo mpiondana sy ny manampahefana amin'ny football, ka ao anatin'izany ny FIFA. Naneho ny fahavinirany tamin'ity volavola ity ihany koa ny mpanohana lehibe, satria nolazain-dry zareo fa tsy nampahalalàna na inona na inona amin'ity volavola Super League ity ry zareo. Araka ny lazain'ny talen'ny Marketing iray tsy te-hanonona anarana tamin'i Tim Crow avy ao amin'ny isportconnect.com tao amin'ny sehatra iSportLearn, “Mba niady varotra indray ny fifanarahana izahay noho ny COVID-19, ary nanao nihoatra noho ny hitsiny izahay, ary dia izao no hamalin-dry zareo anay.”
Nanamarika ny firotsahan'ny klioba anglisy ho “fahafaham-baraka” Gary Neville avy ao amin'ny SkySport ary niantso ny hanasazian'ny Premier League anglisy azy ireo. “Tsy manohitra ny hahamaoderina ny fifaninanana baolina fandaka aho,” hoy izy, “fa ny fampidirana ny tolo-kevitra manoloana ny COVID dia tena fanafintohinana tanteraka. Tokony ho menatra amin'ny tenany ry United sy ny sisa amin'ireo klioba enina lehibe nanasonia izany.”
Nahery vaika ihany koa ny valin-kapoka avy tamin'ny mpankafy klioba tsirairay avy, nahitana ireo mpankafy Chelsea nanao fihetsiketsehana tao amin'ny kianja Stamford Bridge ny 20 aprily, talohan'ny lalao Premier League nifanaovana tamin'i Brighton. Nitarika ny fisintahan'ny klioba anglisy tao amin'ny Super League, notarihan'i Manchester City sy Chelsea ary narahan'ny efatra hafa izany. Nisintaka tamin'ny ligy novolavolaina ihany koa tany Italia ny Inter Milan taorian'ny fanakianana.
Voatery niditra an-tsehatra koa ny mpanao politika, nisioka ny praiminisitra UK Boris Johnson:
Hanimba dia hanimba ny football ny drafitra hanaovana Super League Eoropeana ary tohananay ny manampahefana amin'ny football handray fanapahan-kevitra.
Handona ny fon'ny lalao eto an-toerana ry zareo, ary hampiahiahy ireo mpiondana manerana ny firenena.
Raha ny fandraisan'ny ekipa eoropeana hafa anjara indray, araka ny tatitry ny fampitam-baovao, nohatonina ny ekipa alemana Bayern Munich sy Borussia Dortmund fa tsy nekeny ny tolotra. Anisan'ny nanolorana ho ao anatin'ny ekipa mpanorina miisa 15 ny Paris Saint Germain (PSG) an'i Frantsa fa nitsipaka ihany koa, ka nahazo sitraka avy amin'ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron izany.
Na ny FIFA na ny UEFA dia samy nanondro fa tsy hampandray anjara Mondialy na fiadiana ho tompondaka eoropeana izay mpilalao mandray anjara amin'io Ligy novolavolaina io. Mihasarotra ihany koa ny toe-draharaha ho an'ny klioba mandray anjara satria ilaina ny fankatoavana avy amin'ny fikambanana (federasiona) mitantana ny fifaninanana isa-pirenena.
Maninona no nanangana Super League?
Efa talohabe tany ho any amin'ny taompolo 1980 tany ho any ny nandrafetana hananganana Super League Eoropeana. Tamin'ny taona 2018, ny famoahana alemana Der Spiegel nitatitra amin'ny hanolorana Super League Eoropeana ahitana ekipa 16, tahaka ny Tompondaka. Notondroina tao ihany koa fa hisy ny “ekipa mpanorina fototra” miisa 11 izay voaantoka ny toerany ao anatin'ny 20 taona. Ary hisy ny ekipa dimy tafakatra avy eo ho fanampiny handrafitra ny fifaninanana.
Ny hery mitarika ho amin'izany volavola izany dia ny vola mety ho azo avy amin'ny vola azon'ny media sy ny TV [fahitalavitra], mpanohana goavana, ary ny azo isaka ny lalao iray. Ny laza mahavita zavatra faratampony na eo amin'ny ligy isa-pirenena na manerana ny kaontinanta ihany koa manampy tosika.
Avy amin'ny tatita nozaraina, nisy ny 5 miliara USD vonona avy amin'ny banky fampiasam-bola amerikana JP Morgan hanampiana amin'ny fananganana ny ligy. Ny vatsy dia ampiasaina ho fanohanana ny fototrafitrasan-dry zareo ary ivoahana amin'ny fiandraikan'ny areti-mandringana COVID-19.
Ny volavola dia nametraka fifampizaran'ny 32,5 isanjaton'ny vola azo avy amin'ny dokambarotra ho an'ny ekipa mpanorina, ny 32,5 isanjato fanampiny ifampizaran'ny ekipa 20 mandray anjara, ary ny 20 isanjaton'ny vola azo kosa mifototra amin'ny “zavabitan'ny” klioba. Ny 15 isanjaton'ny vola azo kosa dia mifototra amin'ny haben'ny fampielezam-peo sy sary.
Ny teboka voalohany tsy mahafa-po dia ny dimy amin'ny ekipa miisa 20 hifaninana ihany no tafiditra avy amin'ny “zavabitany ara-panatanjahantena”. Nesoina ny filohan'ny Juventus Andrea Agnelli raha nilaza hoe, “ny ekipa 12 mpanorina dia maneho ireo mpiondana amina miliara manerana ny glaoby sy ny amboara eoropeana miisa 99.” Ny mety ho adinony dia efa ho folo amin'ireo no tsy tena manana laza ara-tantara, mahazo volabe na tena mahavita zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Tsy hazoto hanao tsara ireo ekipa mpanorina ireo ao amin'ny ligy isa-pirenena noho ny antoka maharitra ho azo avy amin'ny Super League.
Niteraka rivo-mahery teo amin'ny tontolon'ny football ity fikasana hanangana ligy mirazotra amin'ny Champion's (League) ity. Ny mpandresy aloha amin'izao fotoana izao dia ny mpiondana sy ny football associations (federasiona). Na izany aza, mbola hitady fanamafisana ny fahefana sy tombondahiny amin'ny vola azo ihany ireo tompo sy filoha(n'ny ekipa) voatery nanao fialantsiny ampahibemaso. Vita ny ady iray, fa hahaliana ny hoavin'ny fanatanjahantena lehibe indrindra manerantany.